Polyquaterniums Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Polyquaterniums Factory
Polyquaternium-1, oo sidoo kale loo yaqaan Polidronium Chloride, PQ-1, waa nooc ka mid ah waxyaabaha wax lagu nadiifiyo oo laga soo qaatay BAK, waxaana loo sameeyay badhtamihii 1980-aadkii Alcon inuu yahay mid lagu ilaaliyo xalka kaydinta muraayadaha indhaha. saadaal ah dhibco indhaha ah oo loogu talagalay glaucoma, xalalka ilmada macmalka ah iyo qaababka qurxinta ee ugu sarreeya. Halbeegyada Farsamada ee Muhiimka ah: (1) 95 ~ 100% Budada: Muuqaalka Amber u eg midab madow oo madow oo adag or Iyadoo aan lahayn Kicinta Biyaha Kala-Bixinta Buuxda ...
Polyquaternium-6 (PQ-6) waa isku-duwaha oo leh nashaad hawleed sare, wuxuu siiyaa saamayn wanaagsan qaboojinta alaabada daryeelka timaha.Polyquaternium-6 way u cadahay inuu yahay jaale yar, dareeraha dareeraha ah. Way fududahay in lagu milmo biyaha, laakiin ma sahlana in la isku daadiyo. Waxay leedahay midab adag oo xasilooni leh iyo xasiloonida xalka wanaagsan ee biyaha. Ma ahan jel oo waxay ku xasilloon tahay baaxadda pH ballaaran. Kalori-lidka iyo cufnaanta sare. Halbeegyada Farsamada: Muuqaalka Midab aan lahayn muuqaal yar oo huruud ah ...
Polyquaternium-7 ayaa si aad ah loogu soo oogay copolymer-ka loo yaqaan 'copolymers' oo loo sameeyay si loo hagaajiyo iswaafajinta iyo caddaynta nidaamyada wax-ku-oolka ah ee anionic. Copolymer-yadan waxaa lagula talinayaa inay hagaajiyaan sifooyinka qoyan iyo kuwa qalalan ee alaabada daryeelka timaha, iyo inay sare u qaadaan dareemaha alaabada daryeelka maqaarka. Halbeegyada Farsamada: Nooca YR-PQ7A YR-PQ7B YR-PQ7C YR-PQ7D Muuqaalka Si cad oo nuxurka dareeraha dareeraha ah ee Soodhaweynta ah 6.0 ~ 7.5 6.0 ~ 7.5 3.3 ~ 4.5 Nafaqo (# 4 @ 12rpm ...
Polyquaternium-10 waxay leedahay qaboojin heer sare ah, antistatic, waxqabad, hagaajinta timaha dhaawacmay, timaha ka dhig mid jilicsan, jilicsan oo dabacsan. Waxqabadka wanaagsan ee dhumucda, antistatic, qaboojinta, qoyaanka, waxay hagaajin kartaa timaha dhaawacmay, waxayna kordhisaa shanlaynta iyo qoyaanka timaha, sidoo kale waxay yareysaa cuncunka ay keeneen astaamaha, dayactirka maqaarka is-ilaalintiisa, waxay siinayaan qoyaan, saliidayn iyo el .. .
Polyquaternium-11 50% waa nooceena cusub ee Polyquaternium-11, waa cusbada polymeric ammonium ee ay sameyso falcelinta diillital diilliyaal iyo copolymer ka vinyl pyrrolidone iyo dimethyl aminoethylmethacrylate. Waxay ku jirtaa fasalka kiimikada ee loo yaqaan 'quaternary ammonium xeryahooda' (guud ahaan loo yaqaan "Quat"). 50% ...
Polyquaternium-11 waa milixda quaterter ammonium ee polymeric ee ay sameysay falcelinta diilliyaal-diilliyaal iyo copolymer ka vinyl pyrrolidone iyo dimethyl aminoethylmethacrylate. Waxay ku jirtaa fasalka kiimikada ee loo yaqaan 'quaternary ammonium xeryahooda (guud ahaan loo yaqaan "Quat"). Polyquaternium-11 waa xalka aqueous viscous sare, Miscible leh biyo iyo ethanol, ur yar oo sifo gaar ah leh. Filim midab leh oo hore iyo wakiil ka-hor-istaaga.
Polyquaternium-22 waa polymer synthetic ah oo ka kooban acrylic acid iyo diallyldimethylammonium chloride, Polyquaternium-22 waa polymer amphoteric, cufnaanta qarashka badan, qoyaan, iyo pH oo leh tiro ballaaran (1-14). Copolymer-yadan waxaa lagula talinayaa inay hagaajiyaan sifooyinka qoyan iyo kuwa qalalan ee alaabada daryeelka timaha, iyo inay sare u qaadaan dareemaha alaabada daryeelka maqaarka. Halbeegyada Farsamada: Nooca YR-PQ22A YR-PQ22B YR-PQ22C Muuqaalka Si cad u yeelo culeys yar oo huruud ah, dareeraha dareeraha ah ee Soodhaweynta 39 ~ 43% 39 ~ 43% 35 ~ 40 ...
Guryaha: Polyquaternium-28 waa cusbo milkaatir ah oo loo yaqaan 'polymeric ammounium salt' oo ka kooban Vinylpyrrolidone iyo dimethlaminopropyl methacrylamide monomers. Waxqabadyada sida filim sameynta iyo wakiil qaboojiyaha ah, waxay sameysaa muuqaal cad, dabacsan laakiin aan lahayn muuqaal muuqaal ah, waxayna bixisaa saliid iyo xasilooni wanaagsan oo hydrolysis ah oo hooseysa ama sare Qiimaha PH, wuxuu muujiyaa iswaafaqsanaan aad u saraysa oo leh waxyaalaha aan ionic iyo amphoteric ahayn.
Guryaha: Polyquaternium-39 waa polymer amphoteric, cufnaanta kharashka badan, qoyaan, iyo pH-ka oo leh tiro ballaaran (1-14). Copolymer-yadan waxaa lagula talinayaa inay hagaajiyaan sifooyinka qoyan iyo kuwa qalalan ee alaabada daryeelka timaha, iyo inay sare u qaadaan dareemaha alaabada daryeelka maqaarka. Halbeegyada Techniacl: Nooca YR-PQ7A YR-PQ7B YR-PQ7C Muuqaalka Si cad oo cufan huruud ah, dareeraha dareeraha ah ee Soodhaweynta 39 ~ 43% 39 ~ 43% 35 ~ 40% pH (1% biyo ah) 4.2 ~ 5.3% 2.5 max. 4.0 ~ 5.5 Viscosity (# 3 @ 12rpm, 25 ℃) 3,000 ~ 6,000 4,000 ~ 15,00 ...
Polyquaternium-51 waa polymer qoyaya biomimetic loogu talagalay in lagu daydo qaab dhismeedka xuubka fosfolipid. Waxay leedahay qaab dhismeed u gaar ah oo loo yaqaan 'amphiphilic' waxayna ku xirnaan kartaa qumanka 'stratum corneum', oo soo bandhigaysa saameyn ku yeelashada huurka maqaarka. Dhanka kale, Polyquaternium-51 wuxuu maqaarka ka ilaaliyaa ku xadgudubka deegaanka: Hagaajinta saameynta carqaladda, iyo yareynta Khasaaraha Biyaha Trans Epidermal. Founctions: · Qoyaan-qabatin la-qabsi waqti-dheer ah. Waxay xakameysaa cuncunka ka imanaya dadka wax soo saaraya iyo ...